यी युवती हरेक रात आफ्नो सर्पसँगै सुत्थिन् तर.. एकदिन डाक्टरले खोले भयानक सत्य! – KhabarTime
यी युवती हरेक रात आफ्नो सर्पसँगै सुत्थिन् तर.. एकदिन डाक्टरले खोले भयानक सत्य!
भेटेनरी डाक्टरले भनिन्, ‘तपाईंको पाइथन धेरैजसो तपाईंको शरिरमाथि चढ्छ र घस्रन्छ भने यसले वास्तवमा तपाईंको आकार मापन गरिरहेको छ । तपाईंलाई आक्रमण गर्नुपूर्व तपाईं कति ठूलो हुनुहुन्छ भनेर परिक्षण गरिरहेको छ । वास्तवमा पाइथनले उनलाई निल्ने तयारी गरिरहेको भनेपछि युवतीको होस नै उड्यो । **भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला**
माता पाथिभराको दर्शन गर्दै ०७७ साल माघ ८ गते बिहिबारकाे राशिफल हेर्नुहाेस्